Uzoluleka abazohambela Intandokazi yeSolezwe usomabhizinisi
UZOCHUSHISA abesifazane ngezamabhizinisi emcimbini weNtandokazi uNksz Zodwa Msimang onguMqondisi weKhono Communications
BAZOKHUTHAZWA yinkakha kwezamabhizinisi abesifazane abazokwethamela umcimbi waminyaka yonke weSolezwe, ohlose ukujabulisa nokuthuthukisa abesifazane.
UNksz Zodwa Msimang onguMqondisi nomsunguli wenkampani ehlela imicimbi nezingqungquthela, Ikhono Communications, uzoba yisikhulumi emcimbini Intandokazi ngo-Agasti 24.
UNksz Msimang ungomunye wosomabhizinisi abahlonishwayo esifundazweni njengoba inkampani yakhe ayisungula ngo-2000, ihlela izingqungquthela nemibukiso emikhulu eThekwini. Kuyona kubalwa iDurban Business Fair okuwumbukiso wosomabhizinisi abancane, ohlelwa uMasipala weTheku minyaka yonke.
Ekhuluma neSolezwe kwenye ingxoxo ekhethekile uNksz Msimang uveze ukuthi olunye ulwazi lokuphatha amabhizinisi waluncela kumyeni wakhe ongasekho uMnuz Don Mkhwanazi.
UNksz Msimang okhulele KwaMashu, uphinde abe ngomunye wabasunguli boMame Investments, okuyinhlangano yamabhizinisi ayiqala nabangani bakhe basenyuvesi. Uphinde abe namanye amabhizinisi ahlukene. Uneziqu zeCommunications and Media Studies azithola e-University of Zululand.
Kulo mcimbi weNtandokazi kuzonandisa iqembu lomculo elidume ngesigqi sesintu, iMalini noDJ Sjerere ojwayele ukudlala emakilabhini nasemicimbini yobumnandi.
Oyibhekelele ezokukhangisa kuleli phephandaba uNksz Noluthando Ngubane, uthe konke sekumi ngomumo ngalo mcimbi futhi abesifazane bazowuthokozela njengenjwayelo. Uthe amathikithi aseqlile ukutholakala kumaComputicket.
Ukhuthaze abantu ukuthi basheshe bawathenge amathikithi ukuze bangaphoxeki. Kujwayelekile ukuthi lo mcimbi uhehe abesifazane basezindaweni ezehlukene esifundazweni, okwenza amathikithi asheshe aphele.
Umcimbi wanonyaka useCoastlands Hotel eMhlanga. Ngowokuqala lo mcimbi nonyaka njengoba ngonyaka odlule ibe mithathu, owokugcina ube seThekwini. Kulindeleke ukuthi abazowuhambela bathole nezipho ezehlukene.